N'ime izu ole na ole, Google ga -akpọsa aha ọhụrụ nke Android N | Androidsis
Google ga-ekwuputa aha gam akporo N na izu ole na ole
Google ọbụna wepụtara ngalaba na weebụsaịtị ya maka gbaa ndị ọrụ ume a tụọ aha maka gam akporo N, ụdị nke anyị nwere nke gara aga maka ndị mmepe ọnwa ole na ole. Ọdịdị ọhụrụ na nke ka ukwuu na -abịa imezi Marshmallow ma tinye akụkụ ụfọdụ n'akụkụ ụfọdụ iji nye ahụmịhe onye ọrụ ka mma na ọkwa niile.
Anyị maara ugbu a na Google emechiela nnabata nke ntụnye ọhụrụ nke aha maka Android N nke a ga -ekwuputa n'izu na -abịa. Yabụ na anyị ga -akpachara anya na ngwụcha ọnwa a ma ọ bụ na mbido Julaị. Ihe na -edoghị anya bụ na ọ bụrụ na ọkwa aha Android N ga -emetụta mwepụta nke ikpeazụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ ma ọ bụ obere ọ ga -ejegharị n'otu ụbọchị ma ọ bụrụ na anyị eleba anya n'okwu Google.
Mgbasa @NameAndroidN ekwuputara na I / O iji nyere Google aka ikpebi ụka nke a ga -eji nọchite anya ụdị gam akporo ọhụrụ. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ siri kọwaa, enweghị ọtụtụ nhọrọ maka mkpụrụedemede a yana karịa ma ọ bụrụ na ị na -achọ isiokwu metụtara ime achịcha dịka aha Android ndị ọzọ niile dịka Ice Cream Sanwichi, Marshmallow, KitKat na ndị ọzọ.
Ihe ngosi izizi na aha ikpeazụ nke ụdị gam akporo na -ejikarị na -egosi na akpụrụ akpụ ọhụrụ na ogige Google. Yabụ n'oge adịghị anya, anyị ga -enwe ike ịhụ nrụnye ya n'otu oge dị ka ntinye na blọgụ ma ọ bụ ibe ọdịda maka OS. Dịka m kwuru, kwa ụbọchị dị n'etiti ịmara aha nke ụdị gam akporo yana ibuga ụdị nke ikpeazụ na ngwaọrụ Nexus ga -adị ezigbo nso, yabụ anyị ga -akpachara anya dịka anyị na -emekarị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google ga-ekwuputa aha gam akporo N na izu ole na ole
Bluetooth 5 nwere oke dị elu na ọsọ ga-ekwuwapụta na June 16
Anyị na-enyocha LG G5, smartphone nwere modular nwere nnukwu profaịlụ maka foto